Ururka Waddaniga Soomaaliyeed oo soo dhaweynaya Dowlad Midnimo Qaran, laakiin ka soo horjeeda Halbeegga “4.5”
Dhamaan xubnaha Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxay si aad ah u soo dhaweynayaan in Shacabka Soomaaliyeed ay samaystaan Dowlad Midnimo Qaran oo ay ku midaysan yihiin dhamaan Beelaha Soomaaliyeed.
Muddo 18 sanadood ah ayaa shacabka Soomaaliyeed ay ku jireen dagaallo, rafaad, Jahwareer iyo Abaaro, sidaas darted Shacabka maanta waxay diyaar u yihiin inay helaan dowlad shaqaynaysa oo ay dhibka uga baxaan, iyo nidaam Caddaalad ku dhisan oo ay wax ku qeybsadaan, si looga gudbo isku dhex yaacsanaanta hadda lagu dhex jiro.
Qabanqaabada ka socota Dalka Jabuuti waxaan u aragnaa inay ku bilaabaty jawi wanaagsan, taasoo ah in Cadamadii Cadowga Itoobiya naga baxaan iyo in kooxihii iska soo horjeeday ay miis soo wada fariistaan, waana arin lagu farxo waana soo dhaweynaynaa.
UWS wuxuu ka soo horjeedaa Qaabka lagu wado in lagu saleeyo Dowlad midnimo Qaran. Qaabkaasoo ah “4.5” oo u dhiganta 4 beelood iyo bar.
Shareecada Islaamka iyo Dhaqanka Soomaalida midna kuma xusna beelo la yiraahdo waa bar. Waa mabda’ Xaaraan ah oo ku salaysan Sad bursi, Xaqdarro iyo Caddaalad darro, waxaana haboon in laga tanaasulo oo beelaha laga dhigo tiro 5 ah oo si siman wax loo qeybsado.
Taariikhda marka dib loogu noqdo mar jirto tirokoob sheegaya sida ay beelaha Soomaaliyeed u kala badan yihiin, weli Soomaaliya kama dhicin tirokoob beeleed oo lagu kala tirinayo Beelaha Soomaaliyeed. Sida la wada ogyahayna ma jirto beel beel ka badan.
Dowladihii horey loogu soo dhisay Jabuuti iyo Nairobi ayaa lagu salaayey hab dhaqan Soomaalida ku cusub oo lagu sheegay “4.5”. waxayna sababtay in dhibaato lagala kulmo, waxaana si caddaan ah loo wadada arkay inay shaqeyn weysay habka wax qeybsiga ah ee ku salaysan “4.5”. Dagaalo, Burbur iyo Barakac hor leh laga sii qaaday.
Habkii Xaqdarada ahaa ee “4.5” oo horey loogu fashilmay ayaa mar kale lagu wadaa in wax lagu qeybsado, iyadoo la iska hilmaamay Fashilkii iyo dhibaatadii horey loogala kulmay.
Hadaba Mowqifka UWS wuxuu taageersan yahay in la dhiso Dowlad Midnimo Qaran oo Soomaali oo dhan ay ku midaysan yihiin, laakiin waxaan shacbiga Soomaaliyeed iyo Madaxdoodaba kula talinaynaa inay ka waantoobaan nidaamka xaqdarada ku salaysan ee ah “4.5”. dibna u fiiriya dhibaatadii horey loogala kulmay.